काेराेना भाइरस : २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर १० हजार ९ सयको मृत्यु, १ लाख संक्रमित ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार काेराेना भाइरस : २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर १० हजार ९ सयको मृत्यु,...
काेराेना भाइरस : २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर १० हजार ९ सयको मृत्यु, १ लाख संक्रमित !
२०७७, ५ बैशाख शुक्रबार १०:०७
विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या डेढ लाख नजिक पुगेको । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार शुक्रबार बिहानसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ४५ हजार ५२० पुगेको छ। संक्रमण हुनेको संख्या भने २२ लाख नजिक पुगेको छ ।
वर्ल्डो मिटर्सको अनुसार अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या २१ लाख ८२ हजार १६० पुगेको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर १० हजार ९१७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९९ हजार जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । बिहीबार बिहानसम्म विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ३४ हजार ६०३ थियो भने संक्रमितको संख्या २० लाख ८२ हजार १०९ थियो ।
सङ्क्रमितमध्ये ५ लाख ४७ हजार २२१ जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् । अहिले १४ लाख ८९ हजार ४१९ जनामा कोरोना भाइरस सक्रिय देखिएको छ । तीमध्ये ५६ हजार ५८८ जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा ३४ हजार ६ सय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २२ सय बढीको मृत्यु भएको छ भने २६ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
अहिलेसम्म त्यहाँ संक्रमितकाे संख्या ६ लाख ७७ हजार ४६६ पुगेको छ । तीमध्ये ५७ हजार ५०८ जना पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ५ लाख ८५ हजारमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये १३ हजार ३६९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अमेरिकापछि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा इटाली पर्छ । अहिलेसम्म इटालीमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या २२ हजार १७० पुगेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ १ लाख ६९ हजार कोरोनाको संक्रमित भएका छन् । बिहीबार मात्रै इटालीमा करिब ४ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ५२५ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितमध्ये ४० हजार बढी पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् ।
कोरोनाले भयावह पारेको अर्को देश हो, स्पेन । स्पेनमा इटालीमा भन्दा पनि बढी संक्रमित छन् । अहिलेसम्म स्पेनमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या १ लाख ८५ हजार पुगेकाे छ । स्पेनमा कोरोनाका कारण १९ हजार ३१५ जनाको ज्यान गुमाएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै स्पेनमा ५०३ जनाको मृत्यु भएकाे छ भने ४ हजार बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमितमध्ये ७४ हजार ७ सय पूर्णरूपमा निको भएका छन् । अहिले त्यहाँ ९० हजार बढीमा कोरोना सक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ७ हजार ३७१ जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
कोरोना संक्रमण हुने देशमा चीनभन्दा अगाडि जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत पनि रहेको छ । फ्रान्समा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको १ लाख ६५ हजार नाघेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या १७ हजार ९२० पुगेको छ ।
बिहीबार मात्रै फ्रन्समा ७५३ जनाको मृत्यु भएको भने १७ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रिमतमध्ये ३२ हजार ८ सय पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ १ लाख १४ हजार बढीमा कोरोना संक्रिय रहेको छ । तीमध्ये ६ हजार २ सयको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ ।
यता जर्मनीको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म जर्मनीमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ३७ हजार नाघेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या भने ४ हजार ५२ पुगेको छ । बिहीबार मात्रै त्यहाँ २४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
अहिले जर्मनीमा ५६ हजार ६४६ जनामा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये ७७ हजार भने पूर्णरुपमा निको भइसकेका छन् । चीनपछि सबैभन्दा बढी पूर्णरुपमा निको हुनेमा जर्मनी नै पर्छ । जर्मनीमा ७७ हजार निको हुनु भनेको सुखद पक्ष हो ।
कोरोनाले सताएको अर्को देश हो बेलायत । अहिलेसम्म बेलायमा कोरोनाका कारणा १३ हजार ७२९ जनाको ज्यान गइसकेके छ । संक्रमितको संख्या भने १ लाख ३ हजार पुगेको छ । बिहीबार मात्रै बेलायतमा ८६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ६ सय नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । बेलायतमा पूर्ण निको हुनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ । त्यहाँ अहिले ८९ हजारमा कोरोना सक्रिय रहेको छ ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भने अहिले ११ सयको हाराहारीमा मात्रै कोरोना सक्रिय रहेको छ । त्यहाँ ७७ हजा ९४४ काे पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म कुल ८२ हजार ३६७ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
Previous articleअमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ हजार नाघ्यो, एकैपटक थपिए ४ हजार सम्भावित मृत्यु
Next articleविपन्न र मजदुरलाई राहत वितरण गर्न नेकपा म्याग्दीले कोषमा सहयोग